China tinya kukiya vinyl flooring Mugadziri uye mutengesi | Karlter
Garandi yekugara anopfuura makore gumi, yekutengesa anopfuura makore matanhatu
Dhizaini Dhizaini huni huni
Nzvimbo yeKutanga Shanghai, China
Zita Rekushandisa Aihwa
Surface Kurapa Embossing yakadzika, ruoko rwakabviswa
Chigadzirwa Chigadzirwa Vinyl Flooring
Chigadzirwa Chigadzirwa Luxury Vinyl Flooring
Feature Isina mvura Yekupfeka inodzivirira Anti-slip
Ukobvu 4.0mm / 4.5mm / 5.0mmmm
Pfeka rukoko 0.3mm / 0.5mm
Chigadzirwa Keywords Vinyl Spc Plank
Saizi Saizi Yakakura
Raw zvinhu Mhandara PVC Vinyl
Kupa Mazano: 300000 Square Meter / Square Meters pamwedzi
Vinyl flooring plank ndiyo yakasvibirira dziviriro yekuchengetedza ivhu nyowani yekushongedza zvinhu, inoumbwa neyemazhinji-masenduru dhizaini akaisirwa, kazhinji anosanganisira polymer yekupfeka-inodzivirira nhete (kusanganisira UV kurapwa), yekudhinda firimu dura, girazi fiber dura, nezvimwe Parizvino, kune matatu marudzi ekutsigirwa neDry backing, yakasununguka lay uye tinya system.
Chii chinonzi Click LVT?
Ipo iine mhando imwechete yekuvakwa kwakapetwa seGlue pasi, tinya pasi peLVT ine misiyano. Sezvo ichida kuisa iyo yekudzvanya system, iwe unowana aya marudzi epasi kazhinji ari mukobvu kupfuura iyo Glue pasi mhando. Nekudaro, izvi hazvireve kuti zvinoita kuti vagare vakasimba. Iyo yekupfeka dura inosanganisirwa inowanzo fanika kune ese ari maviri tinya uye Gira pasi pasi LVT.
Iyo yekumisikidza maitiro inoitwa nyore nekutenda kune iyo yekudzvanya sisitimu inosanganisirwa. Mhando dzakasiyana dzine yavo yekudzvanya masystem uye ivo vanokugonesa iwe kungobaya mataira munzvimbo. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kazhinji kukodzera pasi iwe pachako pane kubhadhara vashandi kuti vakuitire iwe. Panzvimbo pekukwenenzvera pamusoro peiyo subfloor, zvakajairika kushandisa pasi pevhu nekudzvanya LVT. Izvi zvinowedzera kugadzikana kwepasi, pamwe nekuderedza huwandu hwebasa raunoda kuti uite pane subfloor.
Iwo mabhenefiti akakosha ekudzvanya LVT anosanganisira
• Kurumidza uye nyore kuisa
• Dhizaini dhizaini ichivaita kuti vanzwe kunge uriri hwehuni
• Kunyanya kugadzikana pasi petsoka
Iyo yekumhanyisa uye yakapusa yekumisikidza maitiro ndeimwe yemakiyi mabhenefiti eiyi sitaira yekutapira Zvinoreva kuti iwe unogona kuzviita iwe pachako, kuchengetedza mari yakawanda pakuiswa.
Pashure: 12.0mm laminate flooring
Zvadaro: EIR SPC vinyl flooring